अनुदानले मात्रै व्यवसाय माथि उठ्दैन– केसी - Khabar Muluk
अनुदानले मात्रै व्यवसाय माथि उठ्दैन– केसी
[ फाेटाे : हाल नेपालमा अण्डा उत्पादन दैनिक ३० लाख गोटा, ब्रोइलर चल्ला प्रति हप्ता ३५ लाख गोटा, लेयर्स चल्ला प्रति हप्ता २ लाख गोटा, मासु दैनिक ७ लाख के.जी र दाना दैनिक २८ सय मे. टन रहेको छ । ]
आज २५ औं विश्व अण्डा दिवस । विश्वभर कुखुरापालन व्यवसायको विकासभएसगै विश्वभरका पोल्ट्री व्यवसायीहरुको सन १९९६ मा इन्टरनेशनल एग कमिशन स्थापना भएको र हरेक अक्टुवर महिनाको दोश्रो शुक्रवार विश्व अण्डा दिवस मनाउने परम्परा अनुसार २०७७ असोज २३ गते शुक्रबार २५ औं विश्व अण्डा दिवस आज परेको छ । मानव स्वास्थका लागि आवश्यक पर्ने, प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइने र कुनै पनि प्रकारको मिसावट गर्न नसकिने प्रोटिन र खनिज तत्वले भरीपूर्ण सवै भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइने वस्तु नै अण्डा हो । हाल नेपालमा अण्डा उत्पादन दैनिक ३० लाख गोटा, ब्रोइलर चल्ला प्रति हप्ता ३५ लाख गोटा, लेयर्स चल्ला प्रति हप्ता २ लाख गोटा, मासु दैनिक ७ लाख के.जी र दाना दैनिक २८ सय मे. टन रहेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित भइ खवर मुलुकले संघका केन्द्रिय अध्यक्ष शिवराम केसीसंग गरिएको कुराकानी ।
सवै व्यवसायमा यसले असर गर्यो । हाम्रोमा चैत्रको ११ देखि ३/४ हप्ताजति समस्या भयो । दाना पुर्याउन कठीन भयो । उत्पादन भएका उत्पादीत वस्तु पुर्याउन समस्या भयो । वढि समस्या त्यही समय भयो । त्यो समय कुखुरालाई आहार पुर्याउन नसकेपछि पाल्न सकिन्न की भन्ने सम्म किसान पुग्नुभयो । ६ महिना नभएसम्म कुखुराले अण्डा दिँदैन । ८ देखि ९ महिना त्यही समय कुखुरा धेरै विक्रि भयो । मानिसहरु धेरै भएपनि माग धेरै भयो । मुल्य चाहिँ पाएन तर खपत अत्यधिक भयो । २ महिना चाहिँ मुल्यलाई भन्दा विक्रिलाई हामीले ध्यान दियौँ । अहिले झन् यस रोगसँग लड्न भिटामिन डि चाहिने भएकाले पनि अण्डाको माग वढेको छ । प्राय तरकारीसँग मिलाउन सकिने, छिटो छरितो बनाउन सकिने भएकाले पनि यसको प्रयोग र माग दुवै वढ्दो छ । खपत राम्रो छ । यो समय सस्तो मुल्यमा यति धेरै प्रोटिन पाइने अन्य खाद्यवस्तु वजारमै छैन ।
प्रकाशित मिति : असोज २३, २०७७, शुक्रवार ०७:०६ बजे